maamulka degmada Yaaqshiid oo dadkii lahaa ku wareeejiyay guri 25 sanno laga haystay – Radio Muqdisho
Gurigaan oo ku yaala Xaafada Baar ayaan Degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa maanta maamulka degmadaasi waxaa uu ku wareejiyay dadkii iska lahaa oo mudo 25 sano ah laga haystay sida ay warbaahinta Qaranka u sheegeen iyadoo arintani ay qayb ka tahay dadaalo dhawaanahaanba uu waday maamulka gobolka oo dadka hantida kala haysta loogu kala celinayo.
Garaad Siciid Cali Yuusuf oo ah milkiilaha gurigaan maanta maamulka degmada Yaaqshiid uu wareejiyay ayaa waxaa ka mahad naqay talaabadaan uu qaaday maamulka gobolka Banaadir waxaana uu sheegay in Boosaaso uu uga yimid in gurigiisa uu helo taasna ay muujineyso cadaalad in ay ka jirto magaalada caasimada ah.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helo gurigeyga oo 25 sano iga maqnaa aad ayaan ugu mahadnaqayaa maamulka degmada aad ayaan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka Banaadir waxaan leeyahay Muqdisho cadaaladii ayaa soo laabatay cid kasta oo hanta ka maqantahay waxaan leeyahay imaada oo hela hantidiina sida aniga oo kale boosaaso markaan tago amaanka caasimada ayaana halkaa gaarsiinaa”ayuu yiri Garaad Siciid Cali Yuusuf.
Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Cusmaan Maxamuud Cadaawe ayaa ku wareeejiyay garada gurigiisa waxaana uu sheegay in ay qayb ka tahay arintani dadaalada dhawaanahaanba uu uu waday maamulka degmada oo gacan ka helay kan gobolka .
“waxaan leenahay waa mid ka mid howlaha bulshada uu maamulku u hayo dhawaanahaanba waxaan wadnay in dadka hantida laga haysto aan u soo celino cidii sharci u haysatacid kasta oo dhul laga haysto maamulka hala soo xiriirto si aan ugu soo celino cadaalada ayaa shaqeyneysa waa dhamaadeen wixii hore”ayuu yiri Mr Cadaawe.